Vaovao - Fomba hametrahana lobolika fametahana masaka
Karazam-bozaka fanapahana bozaka:
Matetika ny mpamaky bozaka dia mampiasa karazana lasy roa. Matetika, ny mpitrandraka dia mampiasa volo fanapahana. Izy io dia manapaka ahitra ary mamoaka azy amin'ny alàlan'ny tsimok'aretina. Ampiasaina ihany koa ny lelam-boninkazo. Natao hanapaka ny ahitra imbetsaka izy io ary hamadika ny ahitra ho sombintsombiny tsara. Ireo poti-javatra ireo dia mianjera amin'ny tany eo ambanin'ny fanapahana bozaka ary miasa ho toy ny sosona mulch ho an'ny ahitra. Ny fametrahana elatra manarona ny mower dia zavatra azon'ny zaridaina an-trano atao amin'ny alàlan'ny fitaovana misy ao an-trano na amin'ny magazay any an-trano.
Ahoana ny fanovana ny bozaka fanapahana bozaka:
1. Ataovy amin'ny faritra miasa fisaka ilay mower. Ny faritra dia tokony ho roa heny farafahakeliny ny haben'ny mower. Tafio ny fiarovana ny maso sy ny fonon-tànana. Esory ny tariby manjelanjelatra avy eo amin'ilay tsatokazo.
2. Atodiho eo anilany ny volom-bozaka. Atsofohy ny vatan-kazo 6-by-2-inch eo anelanelan'ny faritry ny fanapahana bozaka sy ny tokotanin'ny trano fanapahana bozaka. Ny kitay dia tokony hapetaka amin'ny fomba tsy ahafahan'ny lelany mihetsika.
3. Esory ny voanjo eo afovoan'ny ravina efa misy, mampiasa wrench socket. Alefaso avy eo amin'ilay paositra ilay mpanasa lamba. Esory ny tsipika misy eo amin'ilay paositra. Atokana ny sakana hazo. Tehirizo ny voanjo sy ny mpanasa lamba.
4. Apetaho eo amin'ny tsato-kazo ny moleta milanja. Ampiasao indray ilay mpanasa lamba ary apetaho amin'ny paositra. Esory moramora amin'ny lozisialy faladiany ilay voanjo efa misy. Atsofohy ny vatan-kazo eo anelanelan'ny ravin-tsolika vaovao sy ny sisin'ny tokotanin-tsambo. Apetraho eo amin'ny valin-drakitra herinaratra ny socket. Hamafiso ny voanjo amin'ny alim-bolo miaraka amin'ny enta-mavesatra takiana ao amin'ny antontan-taratasy fametahana lozabe.
5. Atsofohy amin'ny toerany ny fanapahana bozaka. Apetraho ao anaty tifitra fanesorana ny mpitrandraka ahitra mba hitazomana ny ahitra ao anaty tranon'ny mpitrandraka ahitra rehefa fehezina.
6. Atsofohy amin'ny tariby ilay tariby tariby. Atombohy ny fanapahana bozaka. Hamarino fa miasa ny elatra mulching vaovao nefa tsy misy hovitrovitra tsy mahazatra. Karohy ny ampahany amin'ny bozaka mba hahazoana antoka fa tsy mivoaka ny bozaka aotomotitra ny ahitra.
Apetaho amin'ny milina mitaingina mota ny kofehy amin'ny alàlan'ny fampidinana ny latabatra fa tsy ny fanodinana ilay mower mitaingina eo aminy.